YEYINTNGE(CANADA): Friday, November 08
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/08/20130အကြံပြုခြင်း
" လော်ဘီတစ်ယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် "
ဒေါ်စုတို့ ရှစ်ပူးတို့ကို ကုလားအားပေးလို့စွပ်စွဲတယ်..
( ဟာ.....မင်းကလဲ..ဒါတွေကအရင်လူတွေလုပ်ထားတာ..လို့ပြန်ပြောပြီး ၀ါဒဖြန့်လိုက်ပေါ့ကွ..မင်းကလဲ..။
( မင်းကလဲ×ီး တဲ့မှပဲ..ဟုတ်တယ်လေကွာ..ဘာဖြစ်လဲ..မင်းတို့လဲ..သိတာပဲ..အဲဒါကိုမင်းကိုလိမ်ခိုင်းနေတာပဲလေ...)
(အေး..ဟုတ်တယ် ..အဲယောင်လို့.....မဟုတ်ရပါဘူးကွာ..စကားမများနဲ့ကွာ....ကဲ..ရော့...ရော့..အမဲရိုး...လိမ္မာပါတယ်..သားကြီးရာ..သွားသွား..ဖွဘုတ်ပြန်ထိုင်ချေ.....ငါ ဂေါက်သွားရိုက်လိုက်ဦးမယ်..)
" ကလင်...ကလင်..ကလင် "(ဖုန်းမြည်သံ)
( ဟဲလို.......ကိုရွှေမောင်လား ?
Sorry Sorry ကိုယ်နောက်ကျမယ်...၊
ကိုယ့်ခွေးလေးတစ်ကောင်လာအီနေလို့ကွာ..Father Land အောင်ဇော်ဝင်းတို့ရောရောက်ပြီလား..
Naing Group သက်နိုင်ဦးတို့ရော... )
Shwe Pa Yit ရေးသားသည်။
အဘ သခင် ဦးလှကြိုင် ၏ရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ်
(၄)အဘ အမည်-ဦးအောင်ဘွင့် (ဆန်စက်ပိုင်ရှင်)
တော်လှန်ရေးပြီးနောက် မော်လမြိုင်သူ ဒေါ်ဝက် နှင့်
ကျော်တွင် မီးလောင် သဖြင့်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့
တက်ခေတ်စိန် ဇာတ်တွင် ""ငှက်တော်"" အမည်ဖြင့်လူ
အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး စီးပွါးပျက်ကာ သမီးငယ်နှင့် အတူနေ
ပဲခူးမြို့နယ်စစ်မူ့ထမ်းဟောင်း အဖွဲ့မှ လိုအပ်သည်များ
လည်း မွေးရေ /ကျေးလက်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု
မဖြေနိုင်သေးပါသဖြင့်နားလည်ပေးပါရန်၊ အဘ ၏ဖြစ်
စဉ် အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးသူကိုလဲ
Post By - Yaung Ni Oo
Photo by- Kyi Linn
* ကျနော်နှင့်သခင်လှကြိုင်(၁) *
မနေ့က ရန်ကုန် “ မဇ္ဇျိ မ” သတင်းစာက သတင်းထောက် “ဖိုးစိုးသူ”ကလဲ သခင်လှကြိုင်ဆီလိုက်ပို့ ပါဆိုပြီး ပဲခူးရောက်လာတာနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူ ပဲခူးတံတားဆီကို ဒီနေ့နေ့လည်(၂)နာရီမှာသွားကြည့်တော့ အဘက မရှိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ အဘနေတယ်ဆိုတဲ့အိုးလေးစုရပ်ကွက် ရွှေစေတီ လမ်းသွယ်ဆီ ရောက်သွားခဲ့တယ်။အဘဟာ သူမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ (သူ့ဘ၀အတွက် အမှတ်တရရည်ရွယ်ချက်နဲ့)သိမ်းထားပုံရတဲ့ (တို့ဗမာ အစည်းအရုံးငွေရတုပွဲဖိတ်ကြားလွှာ ၁၉၃၅-၁၉၈၅ နဲ့ လွပ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင်လျှောက်ထားလွှာ)တွေကိုထုတ်ပြပါတယ်။၁၉၈၅ မှာမှ လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ သူ့လျှောက်လွှာဟာ ၁၉၈၈ -မ.ဆ.လ ပါတီ နှင့် အတူ တခန်းရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေတိဂုံ ဘုရားခြေရင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးငွေရတု ပွဲကိုတော့ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဘဟာ အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်တဲ့ ရွှေတောင်တိုက်ပွဲမှာပါခဲ့ပြီး ဂျပန် ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ သာယာဝတီ အနောက်ခြမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းပါခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့တပ်ခွဲဗိုလ်ဖြစ်တဲ့ မော်ကွန်းဝင်(ပ)အဆင့် သခင်စောက ထောက်ခံထားပါတယ်။သခင်လှကြိုင်ဟာ တော်လှန်ရေးပြီးလို့ လွပ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ အခါမှာ ဟင်္သာတ မှာရှိတဲ့ တပ်ကထွက်ပြီး ဇာတ်အဖွဲ့ ထဲလိုက်ရာကနေ ပဲခူးရောက်ပြီး အိမ်ထောင်ကျရာက သမီးနှစ်ယောက်မွေးခဲ့ပါတယ်။သခင်လှကြိုင်ဟာ မိသားစုကို အရွယ်ကောင်းစဉ်မှာမိမိ လုပ်အားနဲ့သမာအာဇိဝ ကျတဲ့ ဆေးဆိုးလုပ်ငန်း၊ ဖိနပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ပြီး နိူင်ငံတော်ထောက်ပံ့မှု့ရရှိဘို့ မကြိုးစား(သူ့အတွက်လဲမလိုဘူးထင်ခဲ့ပုံရလို့)ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ ဒီအရွယ်ကျမှ ဒီလို လုပ်စားနေရတာဟာ အရချောင်လို့မဟုတ်ဘဲ(တချို့ ကွန်မက်ပေးသလို)သားသမီးမြေးတွေ အသုံးမကျ/အချောင်ခိုစားနေတာမဟုတ်ဘဲ အမှန်တစ်ကယ် ဒုက္ခ ရောက်နေတာ။မိသားစု အတွက် တိုက်ပွဲ တစ်ခု ၀င်နေတာလို့…….ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်သုံးသပ်မိလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တို့ ဗမာအစည်းရုံးဝင် အဘဦးလှကြိုင်အား ပဲခူးမြို့နယ် စစ်မှု့ ထမ်းဟောင်အဖွဲ့ရုံးတွင်ယနေ့(၈-၁၁-၂၀၁၃)ရက် နေ့က ကျန်းမာစွာ တွေ့ရစဉ်။
(ဓာတ်ပုံ- ပဲခူးမြို့ နယ်စစ်မှု့ ထမ်းဟောင်းအဖွဲ့)
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ငှားရမ်းခသန်း ၇၀ (သိန်း ၇၀၀ ကျော်) ကို ဆယ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ အစိုးရသစ် မတက်မီ သုံးရက်အလိုထူးကုမ္ပဏီစာချုပ်ချုပ်
ယိုးဒယားပိုင် ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ သူဌေးကြီး က သန်းရွှေကြီးဆီ ပုံမှန် အခစား ဝင်
ပုံပါ အပေါ်အနီဝိုင်းက ဒီကနေ့ Facebook မှာ hot ဖြစ်နေတဲ့ မိုက်ကယ်မိုးမြင့် ရဲ့ A6 အကွက်ပေါ့။ နာမည်ပေးထားတာလေးက လှတယ်။ " ပြည်သာ" တဲ့။ သစ်တပင်မှမခုတ်ဘဲ ချမ်းသာသွားသူပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှ မထိခိုက်ဘူး။ အဲဒီ A6 အကွက်က Gas ကို hit ပြီးပြီ။၂၀၁၂နှစ် မတ်လမှာ hit တာ။ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာ နောက်ထပ်လေးကွက် သူ ရသတဲ့။ ကျုပ်ကတော့ယုံတယ်။ သူကြွယ်ဝတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများချောင်လည်ဘို့ဘဲ လို့။ အောက်ကအနီအဝိုင်းကတော့ ဒီမိုဖက်တီး တင်လိုက်တဲ့ ဇောတိက offshore rig ရှိတဲ့ အကွက်ပေါ့။ အဲဒါက ယိုးဒယားပိုင် အကွက်ပေါ့။ M9။ နာမည်ပေးကောင်းတယ်နော်။ ဇောတိက တဲ့။ M9 အကွက်မှာနော်။ ၂၀၀၇ နှစ်မှာ ဧရာမ ဓါတ်ငွေ့အကြောကြီး 7ကြောကို hit ခဲ့တာ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူးနော်။ ဂေါသက ၁ က ပေ ၁၀,၀၀၀ မှာ ဓါတ်ငွေ့ 9.4 MMcfd ထွက်သေးတယ်။ ဒါဘဲလား??။ ဘယ်ကမလဲ။ ကံကုံဏ ၁ ကလဲ 21.2MMcfd နဲ့ 8.6MMcfd ရပြန်သေးတယ်။ ဒါတင်လား??။ဘယ်ကမလဲဗျာ။ ဇောတိက ၂ က 109.5 million standard cubic feet။ ဇောတိက ၃ က 26.7MMcfd။ ဇောတိက ၄ က 71.1MMcfd။ ဇောတိက ၅ က 38.36MMcfd။ မြန်မာ ကမ်းလွန် ရေတိမ် နဲ့ ရေနက် မှာ ရေနံစိမ်း က ၃.၂ ဘီလီယံ ပီပါ နဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ၁၈ထြီလီယံ ကုဗပေ ရှိသတဲ့။ ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝ သလဲ။ ဒါပေမဲ့ ယိုးဒယားက အားလုံးရဲ့ လေးပုံ တပုံ လောက်ကို ယူသွားမှာ။ PTTE ကြွယ်ဝ သွားတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ဘာမျှမချောင်လည်သေးပါဘူး။ မှောင်မိုက်ဆဲပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့.....အဲဒီယိုးဒယားပိုင် ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ သူဌေးကြီး က သန်းရွှေကြီးဆီ ပုံမှန် အခစား ဝင်ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ မီဒီယာသမားတွေစုံစမ်းကြပေါ့ဗျာ။
သထုံအခြေစိုက် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး (လကသ-၃၀၁၄) တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီးအောင်ခန့်မင်း ဆိုသူသည် မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက် ကျေးရွာရှိ ဦးတင်မြင့် ရတနာရွှေဆိုင်ကို နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ဓားပြတိုက်ခဲ့ကြောင်း ဇင်းကျိုက် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မီတာခ တိုးမကောက်ဖိုနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လွှတ်တော်ကို ပြန်တင်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်
“အဓိကကတော့ ကျနော်တို့က အချက်တွေ အကြောင်းပြတာကတော့ နံပါတ်တစ်က ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရတာက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရသေးတယ်။ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကြားလောက်ပဲ ရသေးတယ်။ နံပါတ်နှစ်က ပျောက်ဆုံး ယူနစ်တွေ များနေတယ်။ လွှဲမှားစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတယ်။ နောက်တခါ လူတွေရဲ့ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်နေတယ် ဒါတွေကိုလည်း ပြန်လေ့လာပေးပါ။ တကယ့်ပြည်သူအတွက်ကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းဒေသကြီးတွေက လျှပ်စစ်မီးကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရတယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရတယ်။ အဲဒါကို အချိုးညီအောင်လည်း ပြန်လုပ်ပေးဖို့။ နောက်တခါ ပြည်မနဲ့ ပြည်နယ်တွေ လျှပ်စစ် ၁ ယူနစ်ကို ဈေးနှုန်းကွာတဲ့ ကိစ္စ။ လျှပ်စစ် တယူနစ်ကို ပြည်နယ်တွေမှာက သုံးရာ လေးရာ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာက ၃၅ ကျပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဖြစ်နေတာတွေ ဈေးနှုန်းကို နိုင်ငံတကာမှာလိုပဲ အိန္ဒိယတို့ ဘာတို့လိုမှာပဲ။ တချို့ဟာတွေကို ဈေးယူသင့်တာကိုယူ ဥပမာ – ဇိမ်ခံလုပ်ငန်းတွေမှာ ဈေးယူ။ နောက် အိမ်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကျရင် သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ယူပါဆိုပြီး အဲဒါမျိုးတွေလည်း ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“အစိုးရက သူတို့တင်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ချပေးဖို့ရန်အတွက် ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးတော့ အနီးကပ်ဆုံး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြန်တင်ပေးဖို့။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ မတင်ခင် ဆက်ကြား သူတို့လေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့အချိန် ဆက်ကြားမှာလည်းပဲ ဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်ခြင်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“ဟုတ်တယ်။ မတိုးပါနဲ့အုံး။ ခင်ဗျားတို့ ဒါတွေကို ပြန်စိစစ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့တတွေ သုံးတာ ဆွဲတာတွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုမှ မရှုံးနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်အဆိုကိုထောက်ခံတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က ထောက်ပြတယ်။ ဒီဘတ်ဂျက်စာအုပ်တွေ ကြည့်ရင် မနှစ်ကအထိ ရှုံးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အမြတ်တွေချည်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ထောက်ပြလိုက်တယ်။ သူတို့က ၁၈၈ ဘီလျံလောက် ရှုံးနေလို့ တိုးရတာပါလို့ ပြောတာကိုး။ တကယ်တော့ အခုအချိန်အထိ မရှုံးသေးဘူး။”
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ငှားရမ်းခသန်း ၇၀ (သိန်း ၇၀၀ ကျော်) ...
ယိုးဒယားပိုင် ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ သူဌေးကြီး က သန်းရွှေကြီ...
မီတာခ တိုးမကောက်ဖိုနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လွှတ်ေ...